USA ရောက်နေတဲ့ သူငယ်ချင်း တယောက်ပြောတယ်ဆိုတဲ့.. အမေရီကန် အိုင်ဒေါ အကြောင်း...ဖတ်မိလို့ ပြန်ပြီး မျှဝေလိုက်ပါတယ်...
USA ရောက်နေတဲ့ သူငယ်ချင်း တယောက်ပြောတဲ့ အမေရီကန် အိုင်ဒေါ အကြောင်း
မနေ့က ထူးခြားတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးကြောင့် USA ရောက်နေတဲ့ သူငယ်ချင်း တယောက်ကိုလှမ်းမေးကြည့်တယ် American idol ကြည့်ဖြစ်လား ဆိုတော့
မနေ့ က ထူုးခြားတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေး ကြောင့် USA ရောက်နေတဲ့ သူငယ်ချင်း တယောက် ကိုလှမ်းမေးကြည့်တယ် ! American idol ကြည့်ဖြစ်လား ဆိုတော့ မလွတ်တမ်း ကြည်တယ်
ဒါဆို American idol ပြိုင်ပွဲစည်း ကမ်း တွေ သိလား မေးကြည့် တယ်! စည်းကမ်း များ တယ် / အဓိက အရေးကြီးတဲ့ စည်းကမ်းများသိရင် ဗဟုသုတ အဖြစ် ပြောပေးပါ သူငယ်ချင်း!
“Contestants ပြိုင်ပွဝင် များမှ အောက်ပါ အဓိကစည်းကမ်းသုံးခု မှ တခု ခု ကို သုံးကြိမ် ချိုး ဖေါက် မှားယွင်းသီဆို ခဲ့ရင် ပြိုင်ပွဲ စဉ် level တိုင်း မှာ ဒိုင်နဲ့ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ပြိုင်ပွဲကနေ ထွက် ရပါတယ်
၁) သီချင်း မှား ဆို ခဲ့ရင်
၂) သီချင်း ဆိုစဉ် စာသား မေ့ပြီးကျော်ဆိုရင်
၃) သံစဉ် စသား အသံထွက်မပီသရင်
ဒါဆို တော့ ဒိုင် က ပြိုင်ပွဲ ၀င်သီချင်းဆို နေချိန် မှား ကို အသေအချာအာရုံစိုက်နားဆင် ပြီးအာဂတိကင်းစွာ အားမနာတန်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ရတယ် ကောင်းရင် အားရပါးရ ထောက်ခံ အားပေးရတယ်!
တကယ်လို ပြိုင်ပွဲဝင် က အမှား များ
တကြိမ် 1st warning သတိ ပေးတယ်
နှစ် ကြိမ် 2nd warning သတိပေးတယ်
သုံး ကြိမ် တောင် မှား ဖြစ် ခဲ့ ပြီဆိုရင် တော့ ပြိုင်ပွဲက နေထွက်ရပါတယ်
အဲဒီလို အမှားများသူ တဦး winner ဖြစ် ခဲ့ရင် ဒိုင်တွေကို ဘုတ် အဖွဲ့ နဲ့ပရိတ်သတ်မှ ဒိုင် အဖြစ် ပေး လုပ်ခွင့် မပေးပါ ဒါ ကို ဒိုင်အားလုံး က လိုက်နာရတယ် သူတို့ winner က နောက်ပိုင်း usa tv channel တွေမှ ပရိတ်သတ် ကို လွှင့်ပြသီဆို ရမှာ လေ လုံး ၀ မှား လို့ မရပါ/
နောက်ပိုင်း သူစန်း နဲ့သူ ကမ္ဘာကျော်အဆို တော်ဖြစ်လာကြတာ! တို့ ရွှေပြည် အိုင်ဒေါ ကရော ဒီလိုမျိုး အရေးကြီး ပြီး ခွင့် လွှတ်၍မရသော စည်း ကမ်းတွေပါလားလို့ သူက ပြန်မေးတယ် !
ဘယ်လို ပြန်ဖြေရမလည်း ?
Credit ‘အမေ ချစ်သူ